10 Jees Jees Ah Oo Nashqadeeye Kasta Oo Uu Ogaado | Abuurista khadka tooska ah
10 jees jees ah oo bilaash ah waa inaad u ogaataa naqshadeeye ahaan
Waxaa la xaqiijiyay in fikradaha badankood guuldareysato, laakiin maahan inay xun yihiin, laakiin maxaa yeelay si xun ayaa loo soo bandhigaa. Waan hubaa in haddii aad dareento inaad soo jiidatay adduunyada naqshadeynta garaafka, iyo xitaa intaa ka sii badan haddii aad qayb ka tahay abuure ahaan, waxaad xaqiiqsatay sida ay muhiimka u tahay soo bandhigidda shaqadaadu. Waxaa laga yaabaa inay xitaa muhiim u tahay shaqadaada lafteeda maxaa yeelay kaliya ma ahan abuuristeenu inay ka hadlaan annaga iyo kartideena, laakiin sidoo kale qaabka aan nafteena u leenahay, bandhiga ama soo bandhigida halka aan ku soo jeedinayno halabuurkeena si aan u eegno macmiilka iyo marxaladda. way qabsadaan.
Xaqiiqdii hadda kahor waxaad fiirisay dhowr meelood oo xirfadlayaal waawayn oo dhexdeena ah waxaadna ku jeclaatay jacaylka shaqadooda cajiibka ah oo keliya, laakiin sidoo kale tayada cajiibka ah iyo sarreynta marka aad soo bandhigayso. Goobaha Idyllic, nadiif ah, xarrago leh oo la safeeyey ayaa weheliya naqshadaha cajiibka ah. Wax kasta iyo gabi ahaanba wax walba waa la qaabeeyey oo loo daryeelay si loo bilaabo indha indheynta oo kiciya dareenka wanaagsan iyo jawaabaha iibsadaha.
Waxay u badan tahay in ka badan hal munaasabad aad ka fiirsatay dib-u-habeynta istiraatiijiyaddaada si aad u muujiso shaqadaada ugu fiican oo aad u bilowdo a xiriir toos ah oo udhaxeeya shaqadaada iyo macaamiishaada. Xaqiiqdii waxaad isku dayday inaad fiiro gaar ah u yeelato muuqaalka muuqaalka, aad ku sifeyso aqoontaada sawir qaadista iyo inaad raadiso xaalado wanaagsan. In kasta oo tani ay tahay wax aad u xiiso badan, runta ayaa ah in nasiib wanaag ama nasiib darro aysan dhammaan naqshadeeyayaashu u huri karin waqtiga oo dhan oo aan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno faahfaahinta noocan ah iyo xitaa wax ka yar si loo helo tayo sare ama ugu yaraan heer xayeysiin la aqbali karo.
1 Waa maxay jees jees?
2 Faa'iidooyinka isticmaalka mockups ee naqshadahaaga
2.1 Waxay ku siinayaan qiime dheeraad ah naqshadeyntayada
2.2 Xaqiiqdii waxay ka dhigaan fikrad waxayna ku dhex daraan adduun dhab ah
2.3 Waxay dhammaystiraan macluumaadka iyo codka ay soo saarto alaabteennu
2.4 Waxay ku abuuraan saameyn qaade naxariis leh kan qaataha ah
3 Jeesjeesyada ugu fiican ee la soo dejiyo
3.1 Miis ama miis shaqo lagu maadeysto
3.2 Isdhaxgalka isdhexgalka
3.3 Jees jees buug
3.4 Jees jees buug
3.5 Dibad-u-xayeysiinta bannaanka
3.6 Joornaalada iyo buugaagta majaajilista ah
3.7 Jees jees
3.8 Telefoon casri ah iyo qalab jees jees ah
3.9 Kaarka ganacsiga kaftamid
3.10 Vinyl iyo walax shay
Waa maxay jees jees?
Waxaa laga yaabaa inaadan wali aqoon aduunyada cajiibka ah ee moodooyinka dhijitaalka ah ama jees jeeska, shaki la'aan isbahaysiga ugu wanaagsan ee naqshadeeyaha maanta. Wali ma ogi waxa jees jees ah? Waa jees jees dhijitaal ah ama moodel buuxa oo naqshad ama qalab ah, oo loo adeegsado bandhig, qiimeyn naqshadeed, dhiirrigelin, iyo ujeeddooyin kale oo ka sii fog naqshadeeyaha garaafka - deegaanka macmiilka.
Kuwani jeesjeesyada dijitaalka ah guud ahaan waxay u eg yihiin inay noqdaan faylasha qaabka PSD (asal ahaan ka soo jeeda Adobe Photoshop) iyada oo loo marayo waxaan ku abuuri karnaa jawi qurux badan iyo dejitaal dijitaal ah (in kastoo, haa, si dhab ah u macquul ah) idyllic iyo caadiga ah jawiga xayeysiinta ugu baahida badan
Faa'iidooyinka isticmaalka mockups ee naqshadahaaga
Mockups badanaa waa lagugula talin karaa xirfadeena dhowr sababood awgood:
Waxay ku siinayaan qiime dheeraad ah naqshadeyntayada
Tani way fududahay in la fahmo waxaanan tusaale u soo qaadan doonaa kan ugu garaafka badan (pun loogu talagalay). Aynu ka hadalno baakadaha, ka hor intaan naqshadeynta garaafku ka mid noqon adduunka adduunka ganacsiga iyada oo loo marayo baakadka iyo baakadaha, cidna kama fikirin saameynta togan ee heerka bilicsanaanta iyo dabcan heerka ganacsiga ee soo bandhigidda wax soo saar.
Si kastaba ha noqotee, markii la yimid kacaankii warshadaha, adeegsiga iyo daryeelka bulshada, waxaa soo ifbaxay waxyaabo dheeri ah oo si dhaqso ah ugu soo biiray safka isku imaatinka: tartan iyo baahida loo qabo in laga soo horjeedo badda noocyada tartamaya.
Waxay ahayd markaa xayeysiinta la horumariyey oo ay la jirto mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn: in macmiilku jacayl ku dhaco, ka dhaadhiciyo kana dhaadhiciyo dhammaan dariiqooyinka suurtogalka ah iyo shanta dareen. Waqtigaas, soo jiidasho, baakado asal ah ayaa la bilaabay in la sameeyo, taas oo soo jiidatay dareenka alaabada. Waqtigaas, ma ahayn oo keliya in badeecad la iibinaayey, waxay kaloo iibineysay khibrad, rayn rayn muuqaal ah iyo cirbad asal ahaan iyo hal-abuur. Jees jees maanta maanta wax isku mid ah ayaa dhacaya.
Xaqiiqdii waxay ka dhigaan fikrad waxayna ku dhex daraan adduun dhab ah
Heer nafsi ah sidoo kale waa wax muhiim ah maadaama aysan isku mid aheyn in lagu matalo fikrad iyadoo la adeegsanayo sawir ka badan inta la soo bandhigayo fikrad dhameystiran oo ku taal jawi 100% lagu kalsoonaan karo sidoo kale waa mid ku habboon in la fuliyo howlaheeda.
Haddii, tusaale ahaan, aan u baahanahay inaan horumarinno astaanta noocyada dharka isboortiga, waxaan noqon doonnaa wax aad u qanciya oo xirfad leh haddii aan ku soo bandhigno calaamaddan dharka cayaaraha oo waliba ku raaxeysta wuxuu sameeyo. Tani xaqiiqdii waa mid dhab ah, waxay na siineysaa dareen isku-dhafan iyo qancin baahiyo gaar ah.
Waxaan hubinay fikradeena.
Waxay dhammaystiraan macluumaadka iyo codka ay soo saarto alaabteennu
Waxay taageeraan mid kasta oo ka mid ah tayada ama shaqooyinka loogu talagalay naqshadeynta loo soo saaray lana soo saaray. Deegaanka aad ka diiwaangashan tahay naqshaddu waxay xoojin kartaa tayadeeda. Tusaalaha aan horey u soo dhignay, tusaale ahaan qiyamka sida firfircoonida, fudeydka iyo la qabsiga waxaa lagu xoojin doonaa bay'ada, wax shaki ku jirin inuu u hiilinayo aragtida adduunka.
Waxay ku abuuraan saameyn qaade naxariis leh kan qaataha ah
Sidaa darteed waxay doorbidaan aqbalaadeeda iyada oo loo marayo saameynta qancinta ee uu keenay ururka wanaagsan. Waxyaalahan oo dhan, shaqooyinkeennu waxay ku xirnaan doonaan dejinno qurux badan ama qiimayaal wanaagsan sida firfircoonaan, amar, nadaafad ama qurux. Ka fikir in mid kasta oo ka mid ah walxaha ka muuqda meel u dhow qaabkeenna ay saameyn ku yeelan doonaan fikirkayaga iyo ayaa naga caawin doonta inaan is-fahamno ama ka yar dareenka shucuur qaataha.
Caqli ahaan waxaa jira kumanaan majaajillo ah noocyo badan oo kala duwan: Laga soo bilaabo jeesjeesyada bilaashka ah ilaa nooca jees jeeska ah. Waxaan sidoo kale heli karnaa jees jees (oo loogu talagalay naqshadaha garaafka sida astaamaha) iyo waliba jeesjeeska ma guurtada ah haddii aan u baahanahay inaan sameyno mudaaharaad saddex-cabbir ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale heli karnaa jeesjeesyo xaalado kala duwan leh iyo tonic kala duwan, runtii waa arrin raadinta, in kasta oo dabcan maanta aan doonayo inaan idinla wadaago waxa aan u arko inay yihiin jees jees muhiim u ah naqshadeeye garaafyada maanta.
Jeesjeesyada ugu fiican ee la soo dejiyo
Kadibna waxaan soo jeedinayaa toban nuqul oo master ah oo aad ka heli karto bilaash bangiga mockups-ka oo aan ku soo bandhignay qodobkii hore. Iyaga ku raaxee!
Miis ama miis shaqo lagu maadeysto
Jees jees buug
Joornaalada iyo buugaagta majaajilista ah
Telefoon casri ah iyo qalab jees jees ah
Kaarka ganacsiga kaftamid
Vinyl iyo walax shay
Hadaad ubaahantahay majaajillada sanduuqa ama nooc kale oo baakad ah, khadadka aan hadda ka tagnay waxaad ka heli doontaa ilo badan oo bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 10 jees jees ah oo bilaash ah waa inaad u ogaataa naqshadeeye ahaan
ka soo baxa erotic dijo
Waa wax aad u qabow! aad baad u mahadsantahay Lúa
Ku jawaab meeshuu kacsi ka baxo
Feysal dhaan (@FercoFokey) dijo
Xog aad u fiican oo ku saabsan soo bandhigida sheyga ugu dambeeya ... Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka
Jawaab El Fercho (@FerchoJohan)
Waxaan u maleynayay inaad soo dejisan karto waxyaabaha lagu jees jeesayo: /
Salvi gomez dijo
Iván Díaz wuxuu qaataa so .sidaas waad arki kartaa… .. !!!!
Ku soo jawaab Salvi Gómez
Way quruxsan yihiin, laakiin wax ka fiican ayaa jira
Jawaab u samee Samuel Marchán Fernández
10 ficil oo qosol badan oo kharribaad ah
Cinzia Bolognesi waxay isku daraysaa farshaxanka iyo sawir qaadista si ay ugu abuurto sawirro cajiib ah iphone-keeda